Karoorri sirni faaynaansii Ityoophiyaa ittiin hogganamu qophaa’aa jira – Fana Broadcasting Corporate
Finfinnee, Adoolessa 12, 2011 (FBC)- Karoorri sirni faaynaansii Ityoophiyaa ittiin hogganamu qophaa’aa jira.
Ministir deettaan Ministeera Maallaqaa fi miseensi boordii Baankii Biyyoolessaa Ityoophiyaa Dooktar Iyyoob Takkalliny Faanaa Broodkaastiing Koorporeet waliin turmaata taasisaniin akka beeksisanitti sirni faaynaansiin biyyattii ittiin hogganamu qophaa’aa jira.
Baankonni maallaqa liqeessan keessaa ammi deebifamuusaa shakkii keessa kan jiru akka ulaagaatti kan kaa’amee %5 olii miti jedhan.
Baankii tokkoon ala ulaagaa gamaaggamaatin kaan haala gaarirra jiraachuun ibsameera.
Baankiin Misoomaa Ityoophiyaa rakkoo hojimaataa fi amala baankichaarraa kan ka’e ammeentaan liqaa badaa daangaa kaa’ameef %15 darbuu ibsanii, baankonni maallaqni qusanaan sassaaban tiriiliyoona walakkaa darbuu ibsaniiru.
Liqaan laatanis waggaa waggaadhan %25 oliin guddina agarsiisera.
Liqaa guddaa kan fudhatu mootummaadha.
Qusannaan %60 olii kan galmaa’e baankii tokkotti yammuu ta’u, dameen baankii %35 guddateera.
Ministeerri Galiiwwanii Baatii Sadaasa keessa Birrii biiliyoona 19.2 walitti qabuu…
Daldala alaa irraa galiin Doolaarri Ameerikaa Miiliyoonni dhibbi 9 fi miiliyoonni 16…
Kaffaltoota gibiraa Federaalaa kuma 10 gara sirna taaksii ammayyaatti galchuuf…